लेख स्पिनि ?को बारेमा अधिक जान्न चाहनुहुन्छ? - Semalt, Natalia Khachaturyan को विशेषज्ञलाई सोध्नुहोस्
मूल लेखलाई दुई सय भन्दा बढी पटक फेरि लेख्दा धेरै मूल प्रतिलिपिहरू सिर्जना गर्ने प्रयास गर्दा सामग्रीको नक्कल हुन सक्छ। खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसन (एसईओ) को दुनिया मा, नियमित आधार मा तपाइँको वेबसाइट मा ताजा सामग्री वितरण र पोष्टिंग एकदम महत्त्वको छ। तपाईंको ई-कमर्स वेबसाइटमा सामग्री प्रदान र प्रकाशन गर्दा सम्भावित आगन्तुकहरूको ध्यान खिच्न र वास्तविक समयमा तपाईंको लक्ष्यमा हिट मद्दत गर्दछ।
Semalt , नतालिया खाचातुर्यनको सामग्री रणनीतिकारले भन्छ कि गुगल जस्तो वेब क्रोलरहरूले एल्गोरिदममा तपाईंको वेबसाइटलाई क्रमबद्ध गर्न केही कारकहरू प्रयोग गर्दछ, तपाईंको रूपान्तरण कुञ्जी शब्द महत्वपूर्ण तत्वहरू मध्ये एक हो। सामग्री मार्केटरको रूपमा, तपाइँ तपाइँको कन्वर्टिंग कीवर्डलाई खोजी इन्जिन एल्गोरिदममा कम श्रेणीमा राख्न चाहनुहुन्न। अनलाइन दृश्यता सिर्जना गर्नाले सतर्कता र रचनात्मकता आदेश दिन्छ।
लेख स्पिनि is भनेको के हो?
एल्गोरिदममा उच्च श्रेणीकरण गर्न एक लेखको विभिन्न संस्करणहरू सिर्जना गर्दा तपाईंको SEO अभियान गडबड गर्न सक्दछ। खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन विशेषज्ञहरूका अनुसार लेख स्पिनिaभनेको कालो टोपी एसईओ टेक्निक हो, जुन डिजिटल र सामग्री मार्केटरहरूद्वारा सर्टकटको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। वास्तविक अर्थमा, तपाईंको मस्तिष्कको प्रयोग गरेर सामग्री उत्पन्न गर्न एक अवस्थित लेख स्पिनि toको तुलनामा समय लिन्छ।
रचनात्मक हुनु कुनै विकल्प हुँदैन जब यो तपाईंको व्यापारको दृश्यता सुधार गर्न आउँदछ। जब लेखलाई स्पिनि। गरिन्छ, अन्तिम परिणाम लेखले अर्थ राख्दैन। तपाईको सामग्री धेरै पटक फेला पार्न खोज्नु भएको छ कुञ्जी शब्द भरिनुमा। गुगलसँग कुञ्जीशब्द भरि and र लेख स्पिनि। पहिचान गर्ने तरिका छ।
तपाईंको WordPress वेबसाइटमा स्पन सामग्री पोस्ट गर्नाले तपाईंको बढाएको सगाईलाई ख़तम पार्न सक्छ। यदि तपाईं आफ्नो साइटमा स्पन सामग्री पोस्ट गर्न जारी राख्नुहुन्छ भने, तपाईंको सम्भावित आगन्तुकहरूले तपाईंको पृष्ठहरू पछाडि क्लिक गरेर समाप्त हुन्छ, कम सत्र अवधि र उच्च बाउन्स दरहरूको लागि अग्रणी। उच्च बाउन्स दरहरू अनलाइन व्यावसायको लागि उपयुक्त छैनन् र तपाईंको रूपान्तरण कुञ्जी शब्द श्रेणीकरणमा ठूलो गिरावट निम्त्याउन सक्छ किनकि कुञ्जी वाक्यांशलाई खोजी ईन्जिनहरूले अप्रासंगिक ठान्दछ।
उही लेखको सयौं वा हजारौं संस्करणहरू थोरै व्यस्त हुन सक्छ। यो त्यहि हो जहाँ लेख स्पिनि software सफ्टवेयर आउँदछ। लेख स्पिनरले तपाईलाई वास्तविक समयमा एल्गोरिदममा उच्च श्रेणी दिन्छ। जे होस्, लेख स्पिनरहरू द्वारा उत्पन्न लेखहरू अद्वितीय कीवर्ड र वाक्यांशहरूको संकलनको कारण पढ्न गाह्रो हुन्छ।
लेख कताई परिणाम दिन्छ?
लेख स्पिनि the भरपर्दो सर्टकटहरू मध्ये एक हो जुन तपाइँको रूपान्तरण कुञ्जी शव्द छोटो अवधिमा उच्च बनाउँदछ। जहाँसम्म, कालो टोपी एसईओ प्रविधिहरू प्रयोग गरेर तपाईंको साइटहरूको दृश्यता सुधार एक छोटो अवधिको रणनीति हो जुन भविष्यमा तपाईंको अभियानको पक्षमा छैन।
लेख स्पिनि ofको प्राथमिक अभिप्राय मूल प्रतिलिपि जस्तै रुचिको उही विषयको बारेमा केहि पृष्ठहरू सिर्जना गर्नु हो। स्पन सामग्री सिर्जना गरेपछि, डिजिटल मार्केटरहरू उत्पन्न साइटमा उनीहरूको साइटहरूमा ब्याकलिks्कहरू समावेश गर्दछ। लामो दौडमा, लि search्कहरूले खोजी ईन्जिनहरूमा संकेत गर्दछ कि तिनीहरू प्रसिद्ध र लोकप्रिय छन् उनीहरूको साइटहरूलाई क्रमबद्धताको सन्दर्भमा राम्रो स्थितिमा धकेल्दै।
उही पाठको राम्रो-गुणवत्ताको सामग्री उत्पन्न गर्न अलि बढी हेक्टीक हुन सक्दछ। एक मार्केटरको रूपमा, तपाइँ तपाइँको मूल कागजातको बहु प्रतिलिपिहरू सिर्जना गर्न लेख स्पिनर प्रयोग गर्ने निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि, गुगलले सधैं स्पन सामग्रीलाई दण्डित गर्दछ। तपाइँको अनलाइन अभियानको लागि दीर्घकालीन समाधानको लागि उपलब्ध सेतो टोपी एसईओ टेक्निकहरू प्रयोग गर्न विचार गर्नुहोस्।